बाद ठुलो कि संस्कार ? पार्टी ठुलो कि देश ? सिद्धान्त ठुलो कि विकास ? « Pana Khabar
बाद ठुलो कि संस्कार ? पार्टी ठुलो कि देश ? सिद्धान्त ठुलो कि विकास ?
प्रकाशित मिति : Aug 13, 2017
समय : 11:12 am
ई. सागर ढकाल /काठमाडौं । मैले पार्टी र सिधान्तलाई ५० पटक पनि परित्याग गर्न सक्छु तर देश १ पटक पनि परित्याग गर्न सक्दिन । मेरो लागि मेरो देश नेपाल ९९.९ प्रतिशत हो तर पार्टी ०.१ प्रतिशत मात्र । देश विकासको कसैले ग्यारेन्टी लिन्छ भने म मेरो बर्षौ देखिको पार्टी र सिधान्तको आबद्धता आज नै पूर्ण परित्याग गर्न तयार छु । म मेरो देशको सेवक हु तर देशलाई हानी पुर्याउने पार्टीहरुको जरै देखि पत्ता साफ बनाउने इमान्दार नेपाली हुँ भनेर कति जनाले भन्न सक्नुहुन्छ ? विवेकशील र साझाको एकता भयो , भन्नै परेन । खुशी छु , तर कति मात्रामा भन्ने कुरा हो । म आजको दिन मात्र १ प्रतिशत खुशी छु । किनकि यो एकताले इतिहास रचेको छ तर गर्नु पर्ने काम यती धेरै छ कि यो खुशीको भविष्यका खुशीसंग तुलना गर्दा जम्मा १ प्रतिशत हुन आयो ।
ए पशुपतिनाथ ! तिमीले साच्चै मेरो देश नेपाललाई माया गर्छौ भने यो वर्ष अबको ५० वर्ष पछिको पुस्ताले पनि सम्झिने गरि इतिहास रचेको दिन बनाईदेउ । अब हाम्रो प्रमुख टार्गेट भनेको केन्द्रीय संसदमा ७० प्रतिशत बहुमत हो , मेरो बिचारमा ७० प्रतिशत आउँछ नै तर म्यानमारकी आङ सांग सुकी जस्तो ८० प्रतिशत बहुमत पनि आउन सक्ने थुप्रो आधार देखेको छु । उनको र हाम्रो स्थिती उस्तै छ , उनले ६० बर्षे सैनिक शासन विरुद्ध जितिन हामीले ६० बर्षे लामो संस्कृति, संस्कृत र पहिचान नै सिध्याउने राणा शासनको ( कांग्रेस एमाले माओवादीको) बिरुद्ध जित्छौ ।
मैले कसरी यी पुराना पार्टीलाई सम्मान गरौ भन्नुस न बिन्ति ? ल भन्नुस त हाम्रो ६० वर्षको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि गणतन्त्र कसले लिएर आयो ? मलाई कांग्रेस एमाले र माओवादीको यो ६० बर्षे राजनीतिको एउटा मात्र अति महत्वपुर्ण औचित्वो भन्दिनुस न । बिनम्र आग्रह गरे । गणतन्त्र कसले लिएर आयो ? माओवादी जंगल पस्दा , राजा बिरेन्द्र थिए । राजा बिरेन्द्र बाचिराख्दा माओवादीले झुक्किएर पनि सोचेको थियो गणतन्त्र आउँछ भनेर ? प्रमुख नेता ज्युहरु जवाफ दिनुस । राजा बिरेन्द्रको सत्यनास नभएको भए तपाइलाई लाग्छ , जनता यसरी उर्लिन्थे र पापले भरिएको तत्कालिन राजतन्त्र हटाउँथे ? ख्याल होस् , गणतन्त्र आएको कुनै सँस्कृत मास्ने, ब्राह्मण, राई, लिम्बु, किरात लगायतका जातिको पहिचान नै सिध्याउने, गुडिया जस्ता कांग्रेस एमाले र माओवादीले होइन बरु राजा बिरेन्द्रप्रतिको नेपाली जनताको प्रगाड मायाले हो । राजतन्त्र फिर्ता आउँछ ढुक्क हुनुस तर साहि राजतन्त्र चाँही हुदै होइन, यो पूर्ण रुपमा नाश भैसक्यो । पहिले विकास अनि माया, शान्ति र एकताको लागि बेलायतमा जस्तो राजतन्त्र ल्याइनेछ, तर ५० वर्ष पछि मात्र , जुन बेला हामीलाई विकास भन्दा शान्ति, सुख र माया प्रमुख कुरा हुन्छन । मैले भनेको छु ५० वर्ष पछि मात्र । अबको ५० वर्षको हाम्रो मुख्य धेय विकास मात्र हो, देशको जीडिपी कम्तिमा १००० बिलियन डलर पुर्याउने मात्र हो अरु केहि होइन ।
किराँत त नस्ट नै भैसक्यो , अब पनि एस्तै हो भने ब्राह्मण भन्ने जाति पनि नस्ट भएरै जाने छ । अहिले ब्राह्मणले त टुप्पी पाल्नु , जाँड रक्सी नखानु , बेद( हनुमानचालिस(रुद्री –चण्डी पढ्नु भनेको पाखण्ड र लाजको विषय भैसक्यो । यो तपाई हाम्रो थोरै मात्रमा पनि गल्ति होइन विगत ६० वर्ष देखिको हाम्रा ५या १० नेताहरु मात्र हुन् अरु कोहि पनि होइन । होइन भने हाम्रो छिमेकि गुजरात हेर्नुस, जाँड रक्सि र नशाका बस्तुको गन्ध पनि पूर्ण कडा प्रतिबन्ध गरिएको छ र विकास पनि युरोपको भन्दा केहि काम छैन । तर हाम्रो देशमा नेताले नै यस्ता नशाका वस्तुको पूर्ण समर्थन मात्र होइन दिनहँु नभई नहुने वस्तु भैसकेको छ । अहिलेका कुन ब्राह्मणका नेताले आफ्नो पहिचान जोगाएका छन् ? कोहि १ या २ जना त भन्नुस ? हो एस्तै ब्राह्मण जाति नाश भए जस्तै गएर हाम्रो सम्पूर्ण ४ जात ३६ बर्ण मिलेर बसेका जातजति बिच भाड भैलो मचाएर एस्तै गरेर एक एक गरेर सब जात जति नाश हुनेछन, अब आजको दिनबाट पनि हामी सचेत भएनौ भने , आउनुहोस् अब विकास संगै सबै जात जातिले आ आफ्नो पहिचान पनि जोगाऊ , पहिले जस्तै ४ जात ३६ बर्ण मिलेर मिलेर बसौ । नेपालको र काठमाडौँको स्वर्ण युग फिर्ता लिएर आउ ।
अबको ५० बर्सपछि, जुन बेला हामीलाई ५ या १० वर्षमा फेरिराख्ने देशका अति उत्कृस्ट सफल प्रधानमन्त्री संगसगै आफ्नो छोरा छोरि जस्तै सबै नेपाली जनतालाई सधैभरि माया गर्ने राजा जनकको खाँचो पर्छ, त्यो बेला बल्ल राजतन्त्र आउछ । अहिले भन्न खोजेको पटक्कै होइन , यो मुद्धा नै नउठाउँदा नै रम्रो होला अबको ५० वर्षलाई । यो भनिराख्दा विस्वकै अति बैज्ञानिक जीवन जिउन सिकाउने भागवत गीता सम्झिन आग्रह गरे । राजतन्त्र हटाउनु ठुलो उपलब्धि लाग्छ तपाइलाई ? बेलायत , थाइल्याण्ड , लगायत कैयाँै मुलुकमा राजतन्त्र अझै छ । ६० बर्षे आन्दोलन एक झट्कामा गर्न सकिन्थेन , अरु देशमा जस्तो । दुरदर्शी नेता खोइ ? ५ या १० वर्ष भन्दा अगाडी र सत्ता पछाडी कहिले सोच्न सके हाम्रा कोहि नेताले ?
तपाइ भन्नुहोला तिमी जे बोलिरहेको छौ स्वतन्त्र छौ , त्यो कांग्रेस एमाले र माओवादीको देन हो । हावा गफ गरेर हुन्छ ? प्रजातान्त्रीक मुलुक अमेरिका हेर्नुस र कम्युनिस्ट मुलुक चिन हेर्नुस, तिनीहरुलाई के चाहिएको रैछ ? बाद कि विकास ? साउथ एशियामा कुन चार्हीँ एउटा मुलुक छ जहाँ स्वतन्त्रता छैन ? बरु मलाई चिनमा जस्तै फेसबुक नै ब्याण्ड गर्ने सरकारको खाचो छ , स्वतन्त्रताको नाममा यो गरिबी भन्दा । कुन ठाउँमा कुन जाति र महिला पुगे भन्दा पनि मलाई मेरो पहिलो अधिकार पेट पाल्ने अधिकार पुरा भएको हेर्नु रहर छ । पेट पलिसकेपछि , बिकसित भै सकेपछि, बिहान साझा खान लगाउन पुगेपछि मात्र दिमागले अनेक अधिकारका कुरा सोच्न सकिन्छ । मलाई भोकै राखेर समानुपतिक र जातियताका कुरा नगरियोस आइन्दा । भागवत गीतामा कहाँ तल्लो जातिले छोएको खानु हुदैन भनेर लेखेको छ ? भागवत गीतामा कहाँ महिला बाहिर सरेको बेलामा पुजा गर्नु हँुदैन भनेर लेखेको छ ? भागवत गीतामा कहाँ अरु धर्मलाई सम्मान नगर भनेको छ ? अरु जात संग बिहे गर्यो भने जात खस्छ , ब्राह्मण भईदैन भनेर कहाँ लेखेको छ, एक ठाउँ त देखाउनुस ?
ख्याल होस् ब्राह्मण भनेको दैनिक जीवनको कडा अनुसासन हो रगत होइन र जो काही ब्राह्मण हुनसक्छ येदी कडा अनुसनमा बस्छ भने । भागवत गीता त्यसै भन्छ त मैले के गरुँ ? ३ करोड नेपाली जनतामा कोहि एकजना मात्र पनि छ जसले भागवत गीतामाथि प्रश्न उठाउँन सक्छ ? भागवत गीता पढ्ने सबै हिन्दु हुनुपर्छ भनेर कहाँ लेखेको छ ? भागवत गीताले सबैको धर्म सनातन धर्म भनेको छ ? विश्वकै दुर्लब हामीले हेपेको पुस्तक हो भागवत गीता । अब कुनै मार्क्सबाद, लेलिनबाद र समाजबाद पढ्ने होइन खुरु खुरु हाम्रो देशमै उत्पति भएको हाम्रै भागवत गीता पढ्ने हो, अनुसरण गर्ने हो, यही हो हाम्रो मार्गदर्शन ।
अब विवेकशील साझा पार्टी एकदम सचेत हुनुपर्छ , आङ सांग सुकी जस्तो ८० प्रतिशत बहुमत हाम्रो लागि हाम्रो फुल टार्गेटको ५५ प्रतिशत काम हुनुपर्छ । हाम्रो मुख्य धेय बहुमत होइन , हाम्रो व्यक्तिगत शरिर, चाहना, इच्छा मारेर भए पनि विकास मात्र हो । कम्तिमा हजार अर्ब डलर जीडिपी हो । ए भगवान आङ सांग सुकी जस्तो पनि नाबनाईदेउ हामीलाई बहुमत पाएर विकासको ग्यारेन्टी गर्न नसक्ने । सुरुको १ महिना त बहुमतले सबै खुशी हुन्छन तर पछिसम्म कामले खुशी बनाउन सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने कुरा हो । हामीलाई बहुमत पाउनु भन्दा पनि काम गरेर देखाउन सकिदैँन कि भन्ने एकदमै भित्रबाट डर छ । ए पशुपतिनाथ प्रचण्ड जस्तो पनि नबनाई देउ, पहिलो पार्टी भए भन्दैमा १० वर्षको बच्चा बच्ची जस्तो फुर्केर बस्न खान नहुने ।
दोस्रो संविधान सभाको चुनाबमा देख्नु भएको थियो नि प्रचण्डको फुर्काइ र घमण्ड । सायद प्रचण्डलाई जंगल पस्दा कहिले झुक्किएर पनि प्रधानमन्त्री हुने सपना देखेकै थिएनन् त्यही भएर उनलाई प्रधानमन्त्री पद एउटा बिकासको लागि भन्दा घमण्ड र फुर्काइको लागि भयो, बादँरको हातमा नरिवल जस्तो भयो, अनि देश झन् चरम गरिबीमा गाँजियो । ए भगवान, ए पशुपतिनाथ हामीलाई बहुमत , पहिलो पार्टी , प्रधानमन्त्री, मन्त्री , इज्जत प्रतिष्ठा केहि चाहिएको होइन मात्र चरम विकास र चरम सान्ति चाहिएको हो ।
साझा विवेकशील पार्टीले पूर्ण ६० बर्षे राणा शासनको अन्त्य गर्दै पूर्ण बहुमत ल्याउँछ तर ल्याउने बितीकै हौसिने खुशी हुने होइन । बहुमतको खुसियाली कुनै अबिर दलेर होइन हाम्रो ६० बर्षे दर्दनाक इतिहास सम्झेर आसु बगाएर गर्नुपर्छ । बहुमत आएको २ घण्टा भित्र सबै सरकारी कार्यालय खोलेर सबैले आ आफ्नो घरबाट झाडु पोचा लिएर सफा गर्नु पर्छ । सरकारी कार्यालय आ आफ्नो घर भन्दा पनि सफा राख्नुपर्छ । तपाइको घर फोहोर भए तपाइलाई मात्र असर गर्छ तर सरकारी कार्यालय फोहोर भए तपाइको पुरै सन्तति र समाजलाई ।
तसर्थ सरकारलाई र सरकारी कार्यालयलाई आफुलाई भन्दा पनि बडी माया गर्नुपर्छ । बहुमतको खुसियाली पनि गरिब नेपाली जनतालाई कामले दिन सक्नुपर्छ , कुनै अबिर र मिठाईले होइन । बहुमत आयो भने खुशी हुने, फुर्किने होइन झन् बडी जिम्मेवार हुने हो । अर्काको देशमा हामीले आफैँ धपाएका गरिब युवाहरुको आसु पिएर मनाउने हो खुशीयाली । उनीहरुको बगिरहेको आसु, रगत, पसिना र परिवार बिछोडको पिडा हेरेर अब केहि गर्छौ भनेर रात दिन डटेर काम गर्ने हो । अबिर जति लगाउनु पर्ने थियो लगाइयो, लड्डु जति खानु पर्ने थियो ६० बर्सदेखि प्रत्येक निर्वाचनमा खायियो , अब यस्तो खुसियाली नमनाउ , यो घातक हुदो रैहेछ । बिन्ति हाम्रो बहुमतको खुसियाली अभिर र लड्डुले नभई सरकारी कार्यालयमा सबैले पोचा लगाएर मनाउ । अबको १० वर्ष कम्तिमा हजार खर्ब डलर जीडिपी नभएसम्म कुनै पनि विवेकशील(साझाका नेताले कुनै खुशीयाली नमनाउने , अबिर नलगाउने प्रण गरौँ । मुटु र दिमाग गरिब नेपाली जनता र भागवत गितामा राखेर सबैले बिकासका गफ होइन, विकासका काम नै गरौँ ।
बिन्ति अब पनि नेपाली जनताको आँखामा आशु नआओस । हरेक निर्णय र पद लिनु भन्दा पहिले गरिब नेपाली जनताको आखाँमा हेर्नुपर्छ । पशुपतिनाथ गएर शिबजीको मुर्तिलाई पुजा गर्ने दोस्रो प्राथमिक हुनुपर्छ किनकी हामी माझ अहिले ज्युँदा शिबजी छन् — डा. गोबिन्द केसी । उनको खुट्टा ढोगेर पुजा गर्ने हो । भगवान तपाई हामी भित्रै हुन्छन, शिव जी तपाई हामी भित्रै हुन्छन खोज्न सक्नु पर्छ ।
जोडिनु ठुलो कुरो होइन, ६० बर्षे इतिहासमा अनेक पार्टी जोडिए , फुटे र लुटे । ख्याल होस् जोडिनु ठुलो कुरो होइन र पूर्ण बहुमत पनि ठुलो कुरो होइन, ठुलो कुरो मात्र काम र विकास हो , सबलाई चेतना भया । सबैलाई ख्याल होस् , बहुमत आउनु , पहिलो पार्टी हुनु कुनै महत्वपूर्ण छलांग होइन भन्ने हाम्रो इतिहासले देखाएको छ । अब हाम्रो इतिहास दोहोरिन दिनु हुँदैन । अब इतिहासबाट पाठ सिकुन विवेकशील साझाले । गरिब र इमान्दार नेपाली जनताको भावना र आसामाथि फेरी पनि पुराना भ्रस्ट नेताले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रहार नगरियोस , नलत्यईयोस । एकताको लागि शुभकामना ! देश कायापलट होस् हाम्रै पालामा । म पूर्ण तयार छु कायापलट गर्न आफ्नो तर्फबाट तपाई नि ?
सागर अक्सफोर्ड विस्वविद्यालयका स्नातकोत्तरका विद्यार्थी हुन् ।
साभार – नेपालआज
सरदार वंशु गुरुङ: विश्वविजेता अंग्रेजलाई एसियामा पहिलो पल्ट हराउने नेपाली सेनाको नेतृत्वकर्ता
हाम्रो गाउँको दशैं तिहार पनि ‘क्रिश्चियन धर्म’सँग साटिन थालेपछि
दुबई, कतार जस्तो मरुभूमिलाई स्वर्ग झैँ बनाउने युवाले अवसर पाएमा नेपाललाई पनि स्वर्ग बनाउँन सक्छन्
राजतन्त्र बिरोधि नेताको नजरमा पृथ्वीनारायण: क्रिश्चियन मिसनले खलनायक बनाइयो
भाडामा नेपाली आमाको कोख !
राजाले नै २० हजार क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने त्यो ऐतिहासिक घटना !
बाबुरामको प्रवृत्ति राम्रो छैन,गोर्खामा चुनाव मैले जित्छु : नारायणकाजी श्रेष्ठ
चितवनमा जित्ने छाटकाट नदेखेपछि प्रचण्ड बर्दिया १ बाट चुनाव लड्ने
कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलका सम्धी बने पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सीर्इअो
स्वरोजगार अभियान: यसरी युट्युब चलाएर लखपति बनौं !
पटक-पटक मन्त्री भइसकेकालाई मुख्यमन्त्रीको लोभ
प्रत्येक नेपालीले खानामा दैनिक ३१ रुपैयाँ खर्च गर्ने